Olee otú na-eto eto hydroponics n'ụlọ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Daniel Palomino | | Ọmụmụ ihe ọmụmụ, General, Gburugburu
Mkpụrụ osisi Hydroponic bụ ihe ọkụkụ e ji enweghị ala ha wee pụta dị ka ihe ọzọ maka ọrụ ugbo ọdịnala.
Ebumnuche bụ isi ihe ọkụkụ hydroponic bụ iji kpochapụ ma ọ bụ mebie ihe ndị na-egbochi ihe ọkụkụ nke metụtara ala nke ala, dochie ya na ihe ọkụkụ ndị ọzọ na-akwado ya na iji usoro usoro njikọta fatịlaịza dị iche iche.
A na-akpọ aha ihe ọkụkụ a site na aha nke hydroponics, nke bụ nkwado na-enweghị atụ dị ka peat, ájá, gravel ebe a na-akwụsị mgbọrọgwụ nke ihe ọkụkụ na ngwọta na-edozi ahụ n'onwe ya.
Nke a na - eme ka azịza ya nwee nlọghachi oge niile, na - egbochi usoro anaerobiosis nke ga - eme ka ọ bụrụ ọnwụ nke ọdịnala.
Ọzọkwa Enwere ike ịchọta osisi n'ime ime ụlọ PVC ma ọ bụ site na ihe ọ bụla ọzọ nwere mgbidi mgbidi (nke a na-ewebata osisi ahụ), na nke a mgbọrọgwụ dị na ikuku ma ga-eto n'ọchịchịrị ma kesaa ihe na-edozi ahụ site na ịgba ma ọ bụ obere mgbanye spraying.
N'ihi nyocha nke mmetụta gburugburu ebe obibi nke emere n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya n'elu ala na mmiri dị n'elu mmiri ma na-asọ ma ọ bụ site na ọrụ ugbo n'onwe ya na mbara igwe, anyị nwere ike ịchọpụta na mkpụrụ osisi hydroponic ma ọ bụ ihe ọkụkụ na-enweghị ala. nwere njirimara dị iche iche ma e jiri ya tụnyere ihe ọkụkụ ọdịnala dị ka:
Ike ịnabata ihe mkpofu na ngwaahịa site na ngwaahịa iji mee ihe dị ka mkpụrụ osisi na-eto eto.
Nnukwu nchịkwa nke mmiri onwe onye na ihe oriri na-edozi ahụ, karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na sistemụ mechiri emechi.
Ọ naghị achọ ka oghere buru ibu, ọ bụ ya mere o ji baa uru karịsịa site n'echiche akụ na ụba.
Ọ na-enye mgbọrọgwụ ahụ iru mmiri mgbe niile, n'agbanyeghị ihu igwe ma ọ bụ ogo uto nke ihe ọkụkụ.
Na-ebelata ihe ize ndụ nke ogbugba mmiri n'ubi.
Zere n'efu n'efu mmiri na nri.
Gbaa mbọ hụ na ogbugba mmiri n'ubi n'ime mpaghara mgbọrọgwụ.
Ọ na-ebelata nsogbu nke ọrịa ndị ala na-akpata.
Mụbaa mkpụrụ ma melite ogo imepụta ihe.
Otú ọ dị, ihe ọkụkụ nke ụdị a emepụta usoro nke mmetọ, ọkachasị ndị ụlọ ọrụ na-etinye aka, na-abịa site na:
Ntinye nri na-edozi ahụ na sistemụ mepere emepe.
Mkpọfu ihe mkpofu.
Mwepu nke ngwaahịa na gas.
Enwere ike oriri ozo n'ihi usoro kpo oku na usoro mmezi.
1 Hyddị ihe ọkụkụ hydroponic
1.1 Usoro Nri Na-edozi Ahụ (NFT)
1.2 Iju mmiri na drainage usoro
1.3 Ntapu usoro na edozi ngwọta
1.4 DWP (Omenala Mmiri miri)
2 Ebumnuche nke obibi nke usoro na-eto eto hydroponic
3 Nhazi ọkwa
3.1 Organic mkpụrụ
3.1.2 Ogbugbo osisi
3.2 Inorganic mkpụrụ
3.2.1 Nkume ajị anụ
3.2.2 Polyurethane ụfụfụ
4 Nkwadebe nke ekwukwa n'akwụkwọ agbanwe agbanwe
5 Otu esi eme igwe na-eto eto na mmiri
Hyddị ihe ọkụkụ hydroponic
Usoro Nri Na-edozi Ahụ (NFT)
Ọ bụ usoro mmepụta na ihe ọkụkụ na-enweghị ala ebe ihe ngwọta na-edozi ahụ na-agagharị.
NFT dabere na na-aga n'ihu ma ọ bụ na-agbagharị nke mpempe akwụkwọ nke ihe edozi edozi site na mgbọrọgwụ nke ihe ubi ahụ, na-enweghị ha ka a mikpuru ha na mkpụrụ osisi ọ bụla, ya mere, ọwa a na-akwado ha, n'ime nke ihe ngwọta na-asọba na ọkwa dị ala site na ike ndọda.
Usoro ahụ na-enye ohere ka ukwuu mmiri na ike nchekwa yana ịchịkwa ihe akọwapụtara na-edozi nri na-arụkwa ọrụ nke ọma ma na-enwekwa ike ịhapụ ala ma hụ na otu ịdị n'otu dị n'etiti nri ihe ọkụkụ.
Agbanyeghị, a ga-eme nyocha nke mkposa na-edozi ahụ, yana ndị ọzọ nke usoro physicochemical dịka pH, okpomọkụ, iru mmiri ...
Iju mmiri na drainage usoro
Usoro a nwere trays ebe osisi ndị a kụrụ nọ na mkpụrụ osisi inert (pearl, pebbles, wdg) ma ọ bụ organic. Ndị a trays ha na-ejupụta na mmiri na edozi edozi, nke na-etinye uche site na mkpụrụ.
Ozugbo edozire ihe ndị na-edozi ahụ, a na-ekpocha trays ndị ahụ ma jupụta na mmiri ndị ọzọ.
Ntapu usoro na edozi ngwọta
Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ogbugba mmiri n'ubi ọdịnala mana ya na ihe dị iche na ngafe na-anakọtara na pumped laghachi omenala dị ka mkpa nke otu ahụ si dị.
Nchịkọta nke ngafe ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ na ihe ọkụkụ dị na mkpọda.
DWP (Omenala Mmiri miri)
Nke a bụ ụdị ịkụ nke kacha yie nke ochie.
Ọ nwere ọdọ mmiri a na-etinye osisi n’elu efere, na-ahapụ mgbọrọgwụ na kọntaktị na mmiri na ihe ngwọta ndị agbakwunyere. N'ịbụ onye mmiri na-ada, ọ dị mkpa iji ikuku mmiri dị ka nke ahụ na akwarium ikuku oxygenate ya.
Ebumnuche nke obibi nke usoro na-eto eto hydroponic
Anyị ahụla ụfọdụ uru nke ihe ọkụkụ hydroponic mana anyị ga-ahụkwa uru obibi ha nwere ike ịnye, dị ka:
Ntọhapụ nke ọnụnọ nke ata ah u ma ọ bụ pests na osisi onwe ha.
Typedị ụdị akọ a bara nnukwu uru iji rụọ ọrụ na ala ugbua kara ma ọ bụ pere mpe ebe ọ na-amasị ala ndị ọzọ.
Dị nnọọ ka ọ na-adabereghị n'ọnọdụ ihu igwe, ya mere ọ na-ekwe nkwa ụdị osisi dị iche iche n'afọ.
Dị ka m kwuru na mbụ, enwere ihe dị iche iche maka ịme ihe ọkụkụ.
Nhọrọ nke otu ihe ma ọ bụ ọzọ kpebisiri ike site n'ọtụtụ ihe dịka nnweta ya, ụgwọ ya, ebumnuche nke imepụta ihe ọkụkụ kwuru, ngwongwo-kemịkal, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere ike ịkọwa ihe ndị a n'ime ihe ndi ozo (ọ bụrụ na ọ sitere n'okike, mkpokọta, nke sitere na ngwaahịa ma ọ bụ nke ọrụ ugbo, mkpofu ụlọ ọrụ na obodo mepere emepe) na na inorganic ma ọ bụ mineral substrates (nke sitere n'okike, gbanwee ma ọ bụ mesoo ya, na mkpofu ụlọ ọrụ ma ọ bụ site na ngwaahịa).
N'etiti ha anyị nwere ike ịhụ igwe mmadụ na ọdụ osisi.
Ha na-eme site na foduru nke akpaetu n'etiti osisi ndị ọzọ, nke nọ na usoro nke carbon nwayọ nwayọ ya mere na enweghị kọntaktị na oxygen n'ihi oke mmiri. N'ihi ya, ha na-enwe ike ichekwa usoro anatomical ha ogologo oge.
Enwere ike ịnwe ụdị peat 2, dabere na mmalite nke nguzobe ya ebe ọ bụ na enwere ike ịbunye ihe ọkụkụ na usoro okike dị iche iche.
N'otu aka, anyị nwere nke ìgwè ma ọ bụ ahịhịa ndụ ma ọ bụ eutrophic ma n’aka nke ọzọ, anyị nwere Sphagnum ma ọ bụ ìgwè oligotrophic. A na-ejikarị ndị nke ikpeazụ eme ihe taa, n'ihi ihe ndị e kere eke, maka mgbasa ozi ọdịbendị nke na-eto n'ite. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị magburu onwe ya na physico-chemical.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30, ndị na-eme ihe ike bụ ihe ndị a na-ejikarị eme ihe dị ka mkpụrụ osisi, obere nke nta nke nta anọchila ha, nke anyị ga-ahụ n'okpuru.
Na mgbakwunye, nchekwa nke ụdị mkpụrụ a nwere oke na enweghị ike imeghari, yabụ iji ya karịa nwere ike ibute mmetụta gburugburu ebe obibi dị oke mkpa.
Nhọpụta a gụnyere ma mkpo ime na mpụta mpụta nke osisi.
Ihe eji eme ya bu ahihia nke osisi pine, obu ezie na enwere ike iji otutu osisi di iche iche.
Ndị a barks Enwere ike ịchọta ha ọhụụ ma ọ bụ nke ejirila.
Nke mbu nwere ike ibute oke nitrogen na nsogbu phytotoxicity, ebe barks a dakọtara belata nsogbu ndị a nke ukwuu.
Ngwongwo ya na-adabere na nha nke urughuru, ma porosity na-emekarị karịa 80-85%.
N'ime ụdị substrates anyị nwere ike ịchọta ajị anụ, ụfụfụ polyurethane, aja perlite n'etiti ndị ọzọ, nke m na-agaghị akọwapụta n'ụzọ miri emi, mana m ga-enye obere strok ka ị wee nwee obere echiche. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu, egbula oge ịza ajụjụ.
Nkume ajị anụ
Ọ bụ mineral gbanwere n'ime ụlọ ọrụ. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi ihe aluminium silicate na ọnụnọ nke calcium na magnesium, yana metụtara nke ígwè na manganese.
Ike ikike njigide mmiri.
Nchịkwa nke njikwa zuru oke nke nri hydric na ịnweta.
Mkpochapu ihe mkpofu.
O nwere ike ịbụ carcinogenic ọ bụ ezie na ọ bụghị nke sayensị gosipụtara.
Ọ bụ ihe rọba rọba guzobere site na nchikota nke egosipụta, makwaara site na aha nnabata aha ụfụfụ roba na Spain.
Njirimara ya hydrophobic.
Ihe mkpofu ahihia, dị ka ajị anụ.
Ọ bụ aluminom aluminom nke ugwu mgbawa.
Ezigbo ihe onwunwe.
Ọ na-eme ka njikwa mbido ma belata ihe egwu nke iku ume ma ọ bụ ụkọ mmiri.
Enwere ike ibibi ya n'oge usoro ihe ọkụkụ, na-efunahụ nkwụsi ike nke granulometric, nke nwere ike ịkwado mmịpu mmiri n'ime akpa ahụ.
Ihe nke siliceous ọdịdị na agbanwe mejupụtara, nke na-adabere na mmiri nke mbụ silicate nkume.
Obere ego na mba ebe achọtara ya n'ụba.
Nsogbu sitere na ojiji nke uzuzu di ala
Nkwadebe nke ekwukwa n'akwụkwọ agbanwe agbanwe
Nkwadebe nke ihe oriri na-edozi ahụ dabere na a nhazi mbu n’etiti nri site na mmiri mmiri na ezigbo ụkpụrụ maka ihe ọkụkụ ahụ.
Ihe ndị a na-edozi ahụ nwere ike ịkwadebe site na ngwaahịa azịza, site na ịta ahụhụ ugboro 200 dị elu karịa ngwọta ikpeazụ ma ọ bụ ihe dị ka 1.000 ugboro dị elu n'ihe banyere macroelements na microelements n'otu n'otu.
Ọzọkwa, a na-agbanwe pH nke ngwọta ndị a n'etiti 5.5 na 6.0 site na ịgbakwunye NaOH ma ọ bụ HCl.
Otu esi eme igwe na-eto eto na mmiri
N'okpuru ebe a bụ otu esi ewu usoro eto eto hydroponic dị mfe maka letus 20 na NFT (usoro ihe nkiri edozi) nke anyị hụrụ na mbụ.
Anyị nwere ike ịhụ na site na iji ngwa eji arụ ụlọ na ihe ndị eji eme ihe anyị nwere ike iwulite ọdịbendị hydroponic anyị.
Rịba ama; vidiyo ahụ enweghị egwu ọ bụla n'ihi ya, m na-adụ ọdụ ụfọdụ egwu egwu egwu ka o wee yie ka ọ dị arọ ịhụ.
Vidio a ka Ngalaba Sayensị nke UNAM mebere na Hydroponics Workshop.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ọmụmụ ihe ọmụmụ » Mkpụrụ osisi hydroponic, gịnị ka ha bụ na otu esi eme otu na ụlọ
Aha ya bụ Katherine Hidalgo dijo
Ndewo, ahụla m ya, mana mgbọrọgwụ nke letus ahụ na-acha aja aja mgbe ọ bụ ụbọchị iri na abụọ ka akụchara letus ahụ, gịnị kpatara ya?
Zaghachi Katherine Hidalgo
Isi okwu a na-atọ ụtọ, etinyere m ya n'ụlọ ma enwere m nsogbu, letusi m na-eto ogologo, amaghị m ihe kpatara ya. Mmadu enwere ike inyere m aka ??